[2012-10-03 오후 7:25:00]
नेपालमा संञ्चारमाध्यमको उल्लेख्य स्थापना हुदै गएको छ । यससंगै संञ्चारको भविष्यका वारेमा धेरै वहस हुन थालेका छन् । विषेश गरि टेलिभिजनको स्थापना त थोरै समयमा धेरै भयो । दर्जन भन्दा वढि टेलिभिजन त्यसैको परिणाम हो । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा टेलिभिजनको आवश्यक्ता र महत्व धेरै देखिएपनि दुरदराज सम्म यसको सजह पहुँच भने अझै पुग्न सकेको छैन् । सरकार नियन्त्रीत एकमात्र नेपाल टेलिभिजनले दुरदराज सम्म सेवा दिन खोजेपनि प्रयाप्त छैन् ।
संख्यातमक रुपमा पछिल्लो समय नीजि स्याटेलाईट टेलिभिजनको स्थापना ह्रवातै वढेको छ । टेलिभिजन संञ्चालनको लागि सरकारले अनुमति दिदै गयो सोहि अनुसार करोडौको लगानीमा क्रमशः टेलिभिजन प्रशारणमा आए । सरकारले ईजाजत त दियो तर तिनको अनुगमन गर्न सकेन । अन्धधुन्ध सरकारले टेलिभिजन स्थापनाको अनुमति किन दियो, त्यो अनुमति दिने र लिनेले नै जानुन ।
तर यतिवेला चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने दर्जन वढि टेलिभिजन स्टेशनले आम सर्वसाधारणलाई पस्कदै गएका सूचना र समाचारको विश्वसनीयताको हो । तीनले प्रशारण गरिरहेको सुचना र समाचार कति संन्तुलित र तथ्यपरक छन् त ? एक दुई पुराना र नाम चलेका टेलिभिजन वाहेक अन्यको हैसियत उति राम्रो नभएको समाचार अवलोकन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकार नियन्त्रीत नेपाल टेलिभिजनको समाचार समेत पछिल्ला समयमा स्तरहीन हुदै गएको आमसर्वसाधारणको आरोप छ ।
गएको साउन वाईस गते सोमवारका दिन आठ वजेको प्राईम वुलेटिनमा ललितपुरको विशंखु नारायण हुनु पर्नेमा काठमाडौको भनेर दर्शक भुक्याउने नेपाल टेलिभिजनले कस्तो समाचार प्रस्तुत गर्छ त्यो त सवैलाई थाहा छ । यो त एक उदाहरण भयो गल्ती धेरै देखिन्छन् ।
आमनेपालीको ढुकढुकी वनीसकेको नेपाल टेलिभिजनले यसरी आफनो छविलाई क्रमश धुमिल पार्दे जाने हो भने विश्वसनीयता गुम्दै जाने पक्का छ । नीजिस्तरमा चलेका टेलिभिजनको अवस्था केहिलाई छोडेर अझ ह्रदयविदारक छ । तीनले प्रस्तुत गर्ने वे्रकि र पmल्यास न्यूजलाई केलाउदै हेर्ने हो भने गाईजात्रा नै देखिन्छ । वेक्रि न्यूज दिने होडवाजीका कारण हचुवाका समाचार पस्किन खप्पिस छन् संञ्चारमाध्यम ।
यसमा खासगरि दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या र स्थानका वारेमा पुरापुर गलत समाचार सम्प्र्रेषण हुने गरेको कैयौ उदाहरण फेला पार्न सकिन्छ । टिभीच्यानल पीच्छे फरक तथ्यांक मात्र हैन फरक आशय राखेर समाचार दिने चलन समेत हावी हुदै छ ।
छिटो दिने होडवाजीमा भ्रामक समाचार हेर्नु पर्ने नियती त छदैछ, फरक दुष्टिकोणमा समेत समाचार सम्प्रेषण हुने गरेका छन् । विषेशगरि राजनीतिक समाचारमा यस्तो छुटाउन सकिन्छ । आलाकाचाँ जनशक्तिका कारण समेत श्रव्यदुश्य माध्यम टेलिभिजन पंगु वन्दै गएको छ । सहि समाचारको लागि सञ्चारको भर पर्ने मानिसहरुले गलत समाचार पाईरहेका छन् । कुन समाचारले वेक्रि न्यूजको मान्यता पाउछ र कुनले पाउदैन भन्ने समेत यकिन हुननसक्नुु कति हास्यस्पद कूरो हो ।
अझ हाम्रा संञ्चार मालिकहरु त कम जनशक्ति र साधनमा काम गर्न खप्पिस छन् । उनिहरु संञ्चार उद्योगलाई पानी र कागज कारखाना सम्झिन्छन् अनि त्यसै अनुसार संञ्चारमाध्यम चलाउन माहिर छन् । समाचार चोरचार पार्ने अभ्यास त वाक्लै देखिन्छ ।
विदेशी दुश्य किन्न रोयटरलार्ई पैसा दिनुभन्दा गाडीमा तेल हाल्यो भने दुई दिन वढि गुड्छ भन्ने वज्रस्वाठँ कथित सञ्चारमालिकहरु किन र केकोलागि संञ्चारमा लगानी गरिरहेका छन् ? कारण वुझिनसक्नुको छ । समाचर मात्र हैन दुश्य समेत चोर्ने परिपाटीको विकास हुदै गएको छ । अनलाईन खवरका समाचार तानतुन पार्ने चलनले कोठेपत्रकारीता मौलाउदै छ । त्यति मात्र हैन सकेसम्म कर्मचारीले सस्तो श्रम गरिदीउन् भन्ने आशा पनि गर्छन संञ्चार मालिकहरु ।
त्यसैले नव्वे दीनको एक महिना वनाउदै वल्लतल्ल पारीश्रमीक दिन्छन् । वेलामा पैसा नपाउदा निराश संञ्चारक्रमिहरु हुलका हुल अन्य सञ्चारमाध्यममा जानु पर्ने वाध्यता छ । अर्कोतीर नियुक्ति पत्रका साथै श्रमजीवि पत्रकार ऐनले तोके अनुसारको पारीश्रमीक दिन समेत मरितुल्य हुन्छनू । मोफसलका समाचारदाताहरुलाई सकेसम्म पैसा नै नदिई काममा जोताउने हेपाहा संञ्चारमालिकहरुले राजधानीमा चिल्ला गाडि र आधुनिक वंगालामा समय कटाएपंिन श्रमिकको पसिना चुसीरहेको तथ्यलाई कस्ले वनाउने समाचार ?
यि र यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई सहि वाटोमा हिडाउने कानून छकि छैन देशमा । पीतपत्रकारीतामा रमाउदै आफू अनुकुल नभएमा वा विज्ञापन नपाएमा समाचार तोडमोड गर्दै झूटको खेति गर्ने संञ्चारक्रमि अनि उद्योगि र व्यापारीलाई निशानामा पार्दै ठूलो रकम हात लगाएर टिकेका केहि पतित टेलिभिजनको पर्दाफास कसले गरिदिने ? अनि देशको कुन कानुनले यस्ता समस्याको वकालत गरिदीने ? नेपाली संञ्चारमाध्यमको यस्तै नियतीले समाचारको तथ्यपरक, विश्वसनीय र संन्तुलीत हुनुपर्ने सीद्धान्तलाई क्रमशः तीलाञ्जली दिदै छ ।
यस्तो अवस्थाले आमसर्वसाधारणले कस्तो सूचना पाउलान् अनि उनिहरुले कुन सूचनालाई सहि मान्ने, प्रश्नहरु तेर्सियका छन् चारैतिर । अनि गलत समाचार प्रशारण गर्दा त्यसको असर विष भन्दा घातक हुन्छ भन्ने वुझिदिने कहिल्य ती संञ्चारमाध्यम र संञ्चारक्रर्मिरुले ?
(लेखक माउन्टेन टेलिभिजनका पूर्व जिल्ला समाचार संयोजक हुन् )